अडियो-Technica हेडफोन धेरै लोकप्रिय छन्। कम्पनी को विविधता कम्प्युटर र स्मार्टफोन लागि धेरै मोडेल छन्। तपाईं खरीदार विश्वास छ भने, उपकरण स्टूडियो रेकर्डिङ आवाज लागि माइक्रोफोन संग प्रयोग गर्न सकिन्छ।
संवेदनशीलता हेडफोन धेरै भिन्न छन्। हामी बुरा कुरा भने, विशेषज्ञहरु प्रतिरोध को सानो प्यारामिटर गर्न दर्शाउन। धेरै मोडेल छिटो मिट छन् सस्तो प्लेट प्रयोग गर्नुहोस्। तथापि, ध्यान दिएर मुद्दा मा हेर्न हामी लोकप्रिय हेडफोन विचार गर्न आवश्यक छ।
हेडफोन मा राय Technica ATH-SPORT10
अडियो-Technica (हेडफोन) सामान्यतया ध्वनि स्पष्टताको लागि प्राप्त समीक्षा गर्नेछ। कम नाडी आवृत्तियों उपकरण राम्रो copes। स्पिकरहरू साना परिमार्जनहरू प्रयोग गरेका छन्। पैड चमडा प्रयोग गरेका छन्। तपाईं खरीदार को धेरै विश्वास भने, उपकरणको संवेदनशीलता छैन खराब छ। यो श्रृंखला खेलाडीहरूको लागि हेडफोन उपयुक्त छैन।
वृद्धि आवृत्ति संग, त्यहाँ केही समस्या छन्। यस मामला मा एडप्टर सम्पर्क विसारक संग लागू गरिएको छ। को आउटलेट मा 300 मेगाहर्ट्ज सीमा आवृत्ति भन्दा बढी छैन। यसको बारेमा7हजार को समतल मा एक उपकरण हुनुपर्छ। RUB।
मोडेल ATH-SPORT12 समीक्षा
डीजे लागि माइक्रोफोन संग देखि कम्पनी अडियो-Technica हेडफोनको ATH-SPORT12 उच्च प्रतिरोध प्यारामिटर निराश। तल विसारक आवृत्ति उल्लेखनीय copes। तर, यो headgear राम्रो गुणस्तरको लागू छ भनेर याद महत्त्वपूर्ण छ। यस मामला चमडा प्रयोग घिसने।
तपाईं विशेषज्ञहरु विश्वास छ भने, मोडेल खेल लागि उपयुक्त छ। अत्यधिक सूचक ध्वनि 50 dB अधिकतम पुग्छ। ध्वनि को उच्च आवृत्तियों समस्या infrequently आउँदैन। हेडफोन कान पैड एकदम दृढ निश्चित छ। पनि टिप्पण लायक मोडेलहरू विभिन्न निर्माताहरु को रिसीभर अनुकूलता छ भन्ने छ। श्रृंखला द्वारा प्रदान सामान को मूल्य 7600 rubles देखि सुरु हुन्छ।
हेडफोन विशेषताहरु ATH-SPORT15
अडियो-Technica हेडफोन देखि, earplugs कम्पनी ATH-SPORT15 संकुचित र फोन स्मार्ट विभिन्न निर्माताहरु को लागि उपयुक्त हो। तपाईं खरीदार विश्वास छ भने, कान कप डबल विसारक प्लेट लागू र स्थानहरू धेरै लिन छैन। विशेष ध्यान परिमार्जन आवृत्ति फिल्टर योग्य हुनुहुन्छ। यो एक लाइन र कान पैड लागि बन्द मा स्थित छ। उत्पादन प्रतिरोध मूल्य 30 ohms अधिकतम पुग्छ। कम आवृत्तियों समस्या infrequently आउँदैन। मोनो सिस्टम उपकरण समस्या बिना समर्थन गर्दछ।
तथापि, बेफाइदा पनि हेडफोन छ। सबै को पहिलो, विशेषज्ञहरु विसारक को कम आवृत्ति सीमा भन्छन्। उहाँले चालकता पनि सानो। उच्च आवृत्तियों मा, बास एकदम कडा महसुस गरिएको छ। बस 3.5 मिमि ज्याक अन्तर्गत उपयुक्त मोडेल। खरीद अडियो-Technica (मा-कान हेडफोन), यो श्रृंखला 8200 rubles को लागि हुन सक्छ।
मा हेडफोन ATH-AX20 राय
अडियो-Technica (वायरलेस हेडफोन) ATH-AX20 सम्पर्क कोन को आधारमा गरिन्छ। तपाईं खरीदार विश्वास छ भने, उपकरण राम्रो खेल्दै लागि उपयुक्त छ। यस मामला मा, राम्रो चालकता सुनिश्चित छ। आतिथ्य उल्लेखनीय उत्कृष्ट उत्पादन डिजाइन। उत्पादन मोडेल मुख्य रूप कालो छ। मानक रूप एडप्टर दुई पैड लागू हुन्छ। उचाइ-समायोज्य होल्डर राम्रो सरल छ। इनपुट मा प्रतिरोध मूल्य 30 ohms भन्दा बढी छैन। कर्ड टेप masking प्रयोग गरिएको छ, र यो बिगार्न सजिलो छैन। मात्र 3.5mm मार्फत जडान यन्त्र।
माइक्रोफोन स्टेरियो सिस्टम प्रयोग गरिएको मानक। धेरै खरीदारों उपकरण कम आवृत्तियों को प्रजनन संग copes भन्छन्। प्रतिरोध प्यारामिटर उत्पादन 40 ohms भन्दा बढी छैन। ध्वनि अधिभार परिमार्जन 33 भन्दा बढी dB छैन। श्रृंखला द्वारा प्रदान हेडफोन को मूल्य 8800 rubles देखि सुरु हुन्छ।
मोडेल ATH-AX33 समीक्षा
कम्पनी अडियो-Technica हेडफोनको ATH-AX33 डीजे लागि ठूलो देखि। हामी विश्वास भने प्रयोगकर्ताहरूले संवेदनशीलता उच्च छ छ। प्रतिरोध प्यारामिटर उत्पादन शायद 20 ohms पुग्छ। कम आवृत्तियों को प्रजनन समस्या समय समयमा अवलोकन। अर्को लायक मोडेल खेल को एक किसिम को लागि उपयुक्त छ कि टिप्पण। स्टेरियो सिस्टम यो समर्थन गर्दछ। तपाईं खरीददारों, उच्च आवृत्तियों संग विश्वास छ यदि उपकरण राम्रो copes र वक्ता देखि बास धेरै स्पष्ट आवाज।
हामी उत्पादन को बुरा कुरा भने, ध्यान कम गुणस्तर embouchure हुनुपर्छ। तिनीहरूलाई अन्तर्गत अस्तर चमडा संग लागू छन्। आर्द्र तिनीहरूले चाँडै दरार। अर्को लायक मोडेल चिसो तापमान सहन सक्दैन टिप्पण। पृष्ठभूमि हल्ला अवरुद्ध संग, त्यहाँ केही समस्या छन्। फिट हेडफोन मात्र ज्याक 3.5 मिमि अन्तर्गत यो श्रृंखला। माल को मूल्य 9200 rubles देखि सुरु हुन्छ।
हेडफोन विशेषताहरु ATH-AX35
कम्पनी बाट अडियो-Technica हेडफोनको ATH-AX35 समीक्षा साधारण उच्च गुणस्तरीय अस्तर र कान पैड लागि तयार छन्। हामी कम नाडी आवृत्ति उपकरण संग उपभोक्ताहरु राम्रो copes विश्वास भने। उत्पादन को प्रतिरोध 33 ohms अधिकतम पुग्छ। जब यो ध्वनि अधिक भार 80 dB सम्म अनुमति छ। धेरै विशेषज्ञहरु विसारक अन्तर्गत अस्तर गरिब गुणस्तर प्रयोग भन्छन्।
कम आवृत्तियों को प्रजनन केही समस्या छन्। फिल्टर परिमार्जन मा बास अनुपस्थित छ। अर्को लायक मोडेल राम्रो एडप्टर खडा गर्दैन टिप्पण। हेडफोन देखि कर्ड अक्सर frays र चर्किएको। यो हाम्रो समय मा एक मोडेल 5800 भन्दा बढी rubles छैन हुनुपर्छ।
मा हेडफोन ATH-AVC500 राय
ब्रान्ड अडियो-Technica हेडफोनको ATH-AVC500 गेमिङ लागि राम्रो उपयुक्त बाट। यस मामला मा, तिनीहरूले बास को प्रजनन संग कुनै समस्या छैन। विसारक अन्तर्गत घिसने सम्पूर्ण फोम को गरे। तपाईं विशेषज्ञहरु द्वारा समीक्षा विश्वास छ भने, उत्पादन प्रतिबाधा स्थिर राखिएको छ। हेडफोन कम संग आवृत्तियों ठीक सामना। यस मामला मा एक आवृत्ति फिल्टर उत्कृष्ट चालकता प्रयोग गरिएको छ।
अत्यधिक सूचक ध्वनि कम्तिमा 40 dB छ। उत्पादन प्रतिरोध लगभग 40 ohms पुग्छ। कान कप को उपकरण सानो आकार मा प्रयोग गरिन्छ। तर, कम आवृत्तियों मा लगभग unnoticeable desynchronization। स्टेरियो सिस्टम उपकरण समर्थन गर्दछ। संवेदनशीलता मोडेल अन्य हेडफोन कुनै फरक छ। 8800 rubles को लागि संभव पसलहरुमा प्रतिनिधित्व उत्पादन श्रृंखला किन्न।
मोडेल ATH-AVC600 समीक्षा
ब्रान्ड अडियो-Technica हेडफोनको ATH-AVC600 देखि किनभने राम्रो एडेप्टरको ठूलो मांग गर्दै छन्। यो Headband मा एक विस्तृत पकड प्रयोग गरिएको छ। तपाईं विशेषज्ञहरु विश्वास छ भने, उत्पादन प्रतिबाधा इष्टतम स्तर मा कायम छ।
सुरक्षा प्रणाली वर्ग PP30 प्रयोग गरिन्छ। तल विसारक आवृत्ति उल्लेखनीय copes। Basses राम्रो सुने, तर केही अवस्थामा समन्वयन बाहिर छ। पनि टिप्पण लायक फ्रिक्वेन्सी फिल्टर एक कम चालकता संग लागू गरिन्छ भन्ने छ। उच्च आवृत्तियों मा, ध्वनि गुणवत्ता एकदम कम छ।
खेल मोडेल राम्रो फिट। यस मामला मा कर्ड को सुरक्षा टेप प्रयोग गरिएको छ। इनपुट प्रतिबाधा 33 ohms अधिकतम छ। फिल्टर अन्तर्गत अस्तर सम्पूर्ण फोम बनेको छ र धेरै वर्ष को लागि पछिल्लो गर्न सक्नुहुन्छ। किन्नुहोस उत्पादन श्रृंखला प्रयोगकर्ता 9200 rubles को मूल्य मा सक्षम छ प्रदान।
वक्ता EDIFIER S530D: विनिर्देशों, समीक्षा, फोटो,
किबोर्ड मा रूपमा फरक भाषाहरू र आवेदन मा एक एपोस्ट्रोफी राख्न?
Tiramisu: घर मा नुस्खा
एक भिजेको सपना के हो र कसलाई यो विशेषता शारीरिक सुविधाको लागि
र तपाईं पहिलो फूल फक्रिएको के थाहा?
पास्ता पिस्ता: विवरण र उत्पादन को तयारी को विधिहरू
परियोजना घर66 मीटर द्वारा। सपना वा वास्तविकता?